UGaudí - Uhambo ngemisebenzi yakhe emikhulu njengeCasa Batlló | Ukuhamba kwe-Absolut
UCasa Batlló neminye imisebenzi emihle yobuhlakani uGaudí ongayivakashela
USusana godoy | | España
U-Antoni Gaudí wayengomunye wabakhi bezakhiwo ezinkulu kanye nommeleli ophakeme kakhulu wesimanje saseSpain. Ngakho-ke, usishiyele ifa elihle ongalivakashela namuhla ukuze uqhubeke nokubabaza imisebenzi yakhe, engeke ikushiye ungenandaba, siyakwazi lokho. Enye yazo iCasa Batlló kepha inezinye eziningi okufanele sizazi noma sisondele kuzo.
Ngakho-ke, sikhethe ukwenza ifayili le- uhambo olubonakalayo ngokusebenzisa eminye yemisebenzi eyisakhiwo sodumo nokucabanga kobuhlakani. Bonke banesiphetho sabo siqu, sokudala nesokucabanga esibanikeza umphumela oyingqayizivele. Okuthile okukubonakalise njengesimanjemanje somuntu siqu. Masipakishe ngoba sisohambweni!
1 ISagrada Familia ngu-Antoni Gaudí
2 Indlu yeBatlló
3 Ipaki yaseGuell
4 ICasa Vicens
5 ICapricho yaseGaudí
6 Indlu ebhuquza
ISagrada Familia ngu-Antoni Gaudí
Isonto eliseBarcelona lingenye yemisebenzi evakashelwa kakhulu, futhi ukwakhiwa kwalo kwaqala ngo-1882, ukuba ngelinye lamasonto amade kakhulu emhlabeni. Yize enezinto eziningi, singasho ukuthi wubuciko bakhe obukhulu. Lokhu kwamthatha iminyaka eminingi yempilo yakhe futhi, ngayo, wafinyelela enkathini yemvelo, esevele esesigabeni sokugcina somsebenzi wakhe, lapho kungaba yisifinyezo esihle sakho konke okungenhla. Ithempeli elikhulu kunawo wonke lenziwa ngesitayela semvelo ngaphandle kwengxenye ye-crypt eyayiseNeo-Gothic. Ukuma kweJiyomethri bekungeke kuswele, futhi akufani nemvelo. Uma ungakayivakasheli okwamanje, awukwazi ukuphuthelwa yilesi sivumelwano esiyizimpawu U-Antoni Gaudí!
Kulokhu, sikhuluma ngokulungiswa kabusha kwesakhiwo, esisePaseo de Gracia eBarcelona. Singasho ukuthi sisesikhathini semvelo sikaGaudí, lapho enza khona isitayela sakhe somuntu siqu kakhulu nokuthi ugqozi lwakhe luvela emvelweni. Lapho sengikushilo lokho, ukuvakashela eCasa Batlló kungaba enye yezindawo ezinhle kakhulu zezinzwa zakho. Kungani? Yebo, ngoba ukuvakasha kungaba ukubonga okusebenzisana kakhulu kobuhlakani bokufakelwa, imisindo ye-binaural noma izinzwa ezinyakazayo. Ngamanye amagama, indlela yokuzihlanganisa nomhlaba kaGaudí, yokubona akubonayo noma ukuzwa lokho akuzwe ngombukiso wezinto ezibukwayo. Kungokuhlangenwe nakho okuyingqayizivele okuzophendula imibuzo efana nokuthi ngabe kwakukhuthazwa yini, ukuthi lowo mcabango wobuhlakani wadalwa kanjani nakho konke okwakumzungezile.
Kulokhu kuvakashela, uzophendula kukho konke lokhu nokuningi. Njengoba uzothola igumbi lokuntywila lapho uzothokozela izikrini ezingaphezu kwenkulungwane. Kuzo uzothola zonke izimfihlo zayo ngemvelaphi yayo 'eGaudí Dome'. Kepha hhayi kuphela ukubona kuzokwanela, kepha imisindo emihle kakhulu izokuzungeza ngenxa yeziteshi ezingama-21 zomsindo ezithwebula umoya wemvelo futhi, nokuqagela kwe-volumetric, lapho umlingo uzobe ungaphezu kwangempela.
Ngemuva kokujabulela ukuqala kwayo noma imvelaphi yayo, sekuyisikhathi sokungena nasemqondweni kaGaudí. Okuthile okubonakala kuyinkimbinkimbi ngempela! Kepha ngoGaudí Cube, kuzotholakala. Igumbi elisha lapho line-cube ye-LED emaceleni ayisithupha. Ngayo uzokwazi ukushintsha konke ukuqonda kweqiniso, kuzokusa kwelinye izwe, kumnandi, kepha kukusiza ngaso sonke isikhathi ngezinzwa, ngaphandle kokukhohlwa ukuthi singaphakathi kwengqondo yengqondo. Vele, ngalokhu, bekukhona umsebenzi wokucwaninga ophelele ngemuva kwawo. Kukhethwe imidwebo, kanye nemibhalo noma izithombe nokunye okwenziwe ngosizo lobuhlakani bokuzenzela, okunikeze impilo kule phrojekthi. Sizokubona ngokoqobo ngamehlo akhe nophawu alushiyile emhlabeni.
Singena nini kufayela le- Indlu yeBatlló, sizozijabulela ezinye ukuqagela ngempilo yakhe, izithombe zangaphambilini nakho konke lokhu kuyindlela yokuhamba aye esikhathini sakhe. Okunye okusha ukuthi nje ngokusondela emdwebeni, izinzwa ezinyakazayo ezifakwe kuyo zizoqala ukukhiqizwa kwamafilimu amancane, ngaleyo ndlela kutholakale eminye imininingwane ngendlu kanye nomgogodla womndeni. Ukuqedela ukujabulela lonke ifa lakhe kodwa kumuntu wokuqala, kukwenza kube yinto yomlingo okufanele iphile, okungenani, kanye empilweni. Ngabe ulokotha uthole isimanga sayo?
ENtabeni iCarmelo, enyakatho-ntshonalanga yeBarcelona, ​​sithola IPark Güell, okungenye yemisebenzi kaGaudí eyaziwa kakhulu. Lapho simbona, siyazi ukuthi naye ungena enkathini yemvelo nokuthi ujabulela isitayela sakhe uqobo. Kuyo singathola amakhona akhetheke kakhulu njengomthombo waseSan Salvador de Horta noma umbono wokubuka weJoan Sales, lapho ungathokozela khona ukubonwa kwe-panoramic kweBarcelona. Kusemnyango noma emaphaneli kuphela, lapho singakwazi khona ukujabulela isitayela sobungcweti. Enye yezindawo okufanele zivakashelwe futhi uma usuvele ukwenzile lokho, ukuhambahamba uzungeze le ndawo akukaze kulimaze.
Yize yonke imisebenzi yamakhi inokubaluleka kwayo nempumelelo ngemuva kwayo, kulokhu uma sikhuluma ngakho ICasa Vicens, kufanele sisho ukuthi kwakungomunye wemisebenzi yokuqala ayenza ngemuva kokufunda ubuciko. Ngakho-ke mhlawumbe, ingeza inani elingaphezulu, uma kungenzeka. Ngalesi sizathu, singayibeka esikhathini se-orientalist, ngoba inalezo ziqubulo zasempumalanga uGaudí ayethanda kakhulu ngazo eminyakeni yakhe yokuqala. Isakhiwo esamenyezelwa njengeSiza Sezintshisekelo Zamasiko futhi kamuva saba Indawo Yamagugu Omhlaba ngo-2005. Sisishiya nemibala emihle ku-façade, sibonga ukuqedwa kwaso ngobumba.
Yize kuliqiniso ukuthi imisebenzi yakhe eminingi itholakala eCatalonia, kulokhu kufanele sikhulume ngakho 'isifiso' esiya eComillas eCantabria. Kumele futhi yakhelwe enkathini esempumalanga yeGaudí, lapho ithayili lobumba liyi-protagonist eyinhloko ngaphezu kwamakhothamo nezitini. Njengoba wazi ngokuqinisekile, lesi sakhiwo saphenduka saba umnyuziyamu, ngoba akumangazi. Ngokujabulela nje olungaphambili lwesonto, kuzokuthwebula!
Njengoba sivule umnyango no-El Capricho, naye uyalandela eduze i-Botines House. Ngoba kungenye yalezo zakhiwo ezingaphandle kweCatalonia futhi ikakhulukazi eLeón. Ngemvelaphi yanamuhla, bekuyindawo yokugcina impahla kanye nendawo yokuhlala eminyakeni yokuqala yokuphila. Kodwa vele ngo-1969 yamenyezelwa njengeSikhumbuzo Somlando Sezintshisekelo Zamasiko, esasibuyiselwa ngonyaka we-1996. Namuhla futhi sinendawo yokugcina amagugu kodwa igcina ubuhle bangaphambili, ingqikithi yeGaudí kanye nokubonakaliswa kobuhlakani bakhe. Yiziphi ozivakashele?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » UCasa Batlló neminye imisebenzi emihle yobuhlakani uGaudí ongayivakashela
Izilimi ezibaluleke kakhulu eNdiya
Ukuqanjwa kwesayensi nezobuchwepheshe e-Australia